မြန်မာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပစ်ခတ်တဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်တဲ့ရွာတွေကို ထိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ဆေး (ရုပ်သံ) – BNN
မြန်မာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပစ်ခတ်တဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်တဲ့ရွာတွေကို ထိုင်းစစ်တပ်ကစစ်ဆေး (ရုပ်သံ)
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ၊ ၂၀၂၁
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ပစ်ခတ်လိုက်သည့် လက်နက်ကြီးသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူနေအိမ်တစ်လုံးပေါ် သို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း ထိုင်းအခြေ စိုက်ဒေသခံထံမှ သိရသည်။
บ้านคนไทยในฝั่งไทย ถูกอาร์พีจีจากฝั่งพม่า บ้านได้รับความเสียหาย โชคยังดีไม่มีผู้บาดเจ็บ
เวลา 10.00 น. จุดเกิดเหตุ(บ้านที่ได้รับความเสียหาย)ห่างจากชายแดนเมียนมา ประมาณ 100 – 200 เมตร
ต่อ (2) 👇
Cr. กลุ่มเพื่อนสื่อ จ.ตาก #แม่สอด pic.twitter.com/WmWEgCTjFN
— น้งเป็ดสาววาย 🐣 (@Duckyaoi4289) December 25, 2021
မြဝတီတောင်ဘက် သေဘောဘိုး တပ်စခန်းကုန်းမှ ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့် အချိန်တွင် ပစ်ခတ်လိုက်သည့် လက်နက်ကြီးကျည် တစ်လုံးသည် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်း မော်လီချိုင်း ကျေးရွာ အတွင်း ရှိ နေ အိမ်တစ် လုံး အပေါ်သို့ ကျရောက်ပေါက် ကွဲ ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ လက်နက်ကြီး ကျရောက် ပေါက်ကွဲ၍ ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လူထိခိုက်သေ ဆုံးမှုကိုတော့ မသိရှိရ သေ;ပေ။
ယင်းသို့ လက်နက်ကြီးကျည် ထိမှန် ကျရောက်ခဲ့သည့်နေရာကို ထိုင်းစစ်တပ်က လာရောက်စစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။